जीवनसैली Archives -
आँखाको दृष्ट्रि क्षमतामा वृद्धि गर्नको निम्ती यी खानेकुरा नियमित खानुहोस् ।।
२०७८ जेठ १४ गतेको राशिफल ।
Leak Nepal	 Dec 22, 2020 0
मनोचिकित्सकहरुको भनाइ अनुसार आफैंप्रति शंका गर्नु पर्ने धेरै वटा कारणहरु हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि हामी कसरी हुर्किएका छौं भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वमा उनको लालनपालनको तरिकाले पनि निकै प्रभाव पार्न…
बालबालिकाले जब कुनै राम्रो काम गर्छ, तब उनीहरुलाई थप प्ररणा दिन उपहार दिने गरिन्छ । परिक्षामा उत्कृष्ट अंक हासिल गरेमा वा कुनैपनि क्षेत्रमा प्रगति गरेमा उनीहरुलाई उपहार दिइन्छ। यसैगरी जन्मदिन, नयाँ बर्ष, क्रिसमस जस्ता विशेष अवसरहरुमा पनि…
काठमाडौं, हिउँदे जीवनशैली जिउनु कुनै पनि कोणबाट सजिलो छैन। यो मौसममा शारीरिक स्वास्थ्यसँगै मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । सामान्य मुड परिवर्तन, तनाव बढ्नु, चिन्ता र उदासीनताका कारण पनि चिसो मौसममा मानसिक स्वास्थ्य प्रतिकुलताको…
Leak Nepal	 Dec 18, 2020 0
नाक बन्द हुँदा होस् या चिसोका कारण हुने रुघाखोकी लाग्दा नै किन नहोस्। नाकमा तेल हाल्न नै बुढाबुढीहरुलेसल्लाह दिन्छन् । उनीहरुको सल्लाहलाई कतिपयले वास्ता नगर्ने समेत गर्छन्। तर यो आफैँमा प्रभावकारी र उपयोगी सल्लाह हो। विभिन्न चिकित्सकीय…
स्वेता पछि रेखाको विवाहको चर्चा!
Leak Nepal	 Dec 17, 2020 0
अभिनेत्री स्वेता खड्काको बिहे भएपछि अब बजारमा रेखा थापाको विवाहको चर्चा शुरु भएको छ । उनी अहिले आफ्नो नयाँ चलचित्र निर्माणको तयारीमा छिन् ।यसै क्रममा चलचित्र बजारमा रेखाको विवाहको हल्लाले तरंग सिर्जना गरेको छ । छविराज ओझासँग डिभोर्सपछि रेखा…
बिजयेन्द्रले श्वेतालाई साइकल सिकाउँदैस साइकल बाट झण्डै ल”डिन श्वेता भिडियो सहित
Leak Nepal	 Dec 16, 2020 0
पछिल्लो समय अझ बढी चर्चा कमाएकी नायीका श्वेता खड्का अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल नै भइरहेकी छिन। धनगढीका अर्वपती ब्यबसायीका छोरा विजयेन्द्र सिंह राउतसँग धुमधामले विबाह गरेसँगै अहिले उनी समाचार र युट्युवमा ट्रेण्डिग लिस्टमा परिरहेकी छिन।…
बाबा तपाईँले बनाएका ती ठूला घरमा हाम्रोमा जस्तै पानी चुहिँदैन होला है।
काठमाडौँ, बाबा तपाईँले बनाउने घर कति ठूला–ठूला छन्, त्यहाँ हाम्रो घरमा जस्तै पानी चुहिँदैन होला है, छोरीले यसरी प्रश्न गरिरहँदा राजकुमार श्रेष्ठ छानाबाट चुहिँदै गरेको पानीबाट घरभित्रका सामानहरु जोगाउन व्यस्त थिए। किन नचुहिँनु छोरी त्यो घर त…
के तपाईं बच्चालाई आफूले सोचेजस्तै बनाउनुहुन्छ ?
धेरै अभिभावक यस्ता हुन्छन्, जो बच्चालाई आफूले चाहे जस्तै बनाउन खोज्छन्। जस्तो कि हरेक कुरामा पोख्त होस्। परीक्षामा अरुले भन्दा राम्रो अंक प्राप्त गरोस्। खेलकुदमा पनि उत्कृष्टता हासिल गरोस। पढाइलेखाइ, नाचगान सबैमा निपूर्ण होस् । समयमा खाने,…
फिल्मबाट डेब्यू गरेर पछुताएकी छैनः एलिजा
Leak Nepal	 Dec 15, 2020 0
चलचित्र ‘अनुराग’मा काम गरेपछि मोडल तथा नायिका एलिजा गौतमको प्रशंसा भन्दा बढी आलोचना नै भयो। उनको अभिनयलाई लिएर धेरै ट्रोलहरु बने। उनै, एलिजा अहिले म्यूजिक भिडियोमा व्यस्त छिन्। लकडाउनपछि एलिजाले दर्जन बढी भिडियोमा काम गरिसकेकी छिन्। उनले,…
सिन्दूर हा’ल्दाहाल्दै प्रहरी आएर बिहे रो’किदिए, रि’साएका बेहुला साली लिएर भागे
विवाहमा बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दूर हा’ल्दाहाल्दै प्रहरी आएर बालविवाह भएको भन्दै विवाह रो’किदिएपछि रिसाएका बेहुलाले बेहुलीकी बहिनीकै अ’प’ह’र’ण गरेका छन् पुलिसले ना’बालिग किशोरीको विवाह रो’क्नुका साथै अ’प’ह’रि’त बालिकाको पनि उ’द्धार गरेको छ ।…